‘गाजलु’ चलचित्रकी नायिका श्रृष्टि श्रेष्ठ यतिबेला रंगिन मिडियामा गसिप बनेकी छिन् ।
गाजलु चलचित्र प्रदर्शन भईरहेको बेलामा निर्माण युनिटले प्रचारका लागि चितवन पुग्दा गरिएको पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रममा एउटा नमज्जाको घटना घटेको युटुबमा आएको भिडियो मार्फत थाहा पाईयो । यस्तो किसिमको समाचार बाहिरिनु भनेको नेपाली सिने क्षेत्रका लागिनै दुखद क्षण हो ।
भिडियो हेरे पछि म एक दशक लामो मेरो चलचित्र पत्रकारिताको हिसाबले केहि लेख्न मन लाग्यो –
यो भिडियो हेरेपछि कलाकार र पत्रकार दुबै संयमित नभएको मेरो ठम्याई रह्यो । हुन त यो कुनै ठुलो कुरा होईन् । साना तिना कुरालाई ठुलो बनाउने परिपाटी सबै भन्दा बढी रंगिन दुनियामा छ । त्यसो त बनावटी नाटकले पनि धेरै गसिप जन्माईदिने गरेको छ यो क्षेत्रमा ।
तलको भिडियो हेर्दा
१ . पत्रकार साथिहरु तपाईहरु पनि केही संयमित भईदिनुहोस मैले जे देखे त्यो लेखे पत्रकार पनि आचार संहिता भित्र नरहेको स्पष्ट देखिन्छ कोही कसै संग कुरा गर्दा औला ठड्याएर कुरा गर्न पाईदैन यहाँ तपाई आफ्नो प्रश्नमा नायिकालाई औला ठड्याएर कुन आचार संहिता प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ स्पष्ट हुनुहोस ।
२.पत्रकार साथि तपाई यति समय उती समय यो क्षेत्रमा बिताएर हेर्नुहोस भन्दै अर्डर गरिरहनु भएको छ , यस्तो खालको अर्डरलाई तपाई आफै कसरि लिनुहुन्छ मनन गर्नुहोस ।
१. तपाईको बारेमा कसैले प्रश्न गर्छन भने तपाईको बारेमा जान्न त जरुरी छ नै तर पनि तपाईको बारेमा जान्न चाहनेका लागि तपाई आफैले म यस्तो हुँ भनेर भन्न सक्ने साहस बटल्नुहोस । तपाईको यो भिडियो हेर्दा अमहताले भरिपुर्ण केटीको भाव झल्कन्छ नकि नायिका । पहिले तपाई पनि नायिका बन्नका लागि अभिनयका पछाडी चाहीने अन्र्तबस्तुहरु खोतल्नुहोस ।
तपाई पुण रुपमा सक्षम नायिका बन्नका लागि अभिनय र फिल्म मात्र सिकेर हुन्न रिलमा मात्र होईन रियलमा पनि हिरोईन लाग्ने बातावरण तपाईले मिलाउने हो । बलजफतै संग तपाईलाई कसैले हिरोईन बनाएको हुदैन । हुनत तपाईलाई यस्तो कुराले फरक नपर्ला तर तपाईको यस्तो हरकतले संम्बन्धित फिल्मका टिमलाई असर गर्छ , यता तिर पनि ध्यान दिनेकी ?
ईतिहास पल्ट्याउनु तपाईका लागि घातक बन्न सक्छ तपाईको यस्तो व्यवहार ।
चलचित्र क्षेत्रमा यस्ता घटनाहरु घटिरहन्छन् । तर यो सुखद समाचार होईनन् यसरी कलाकार र पत्रकारको व्यवहार बाझिनु भनेको “एउटै थालमा खाएर सोही थालमा छेद गर्नु” जस्तै हो । यदी तपाईहरु नेपाली सिनेमा क्षेत्रकै लागि सोच्नुहुन्छ भने आ आफ्नो ठाउँमा सच्चिनु आवश्यक छ ।